Toliara : Fihinanana soka-dranomasina, olona am-polony marary - Midi Madagasikara
You Are Here: Home → A la une → 2014 → avril → 9 → Toliara : Fihinanana soka-dranomasina, olona am-polony marary
Toliara : Fihinanana soka-dranomasina, olona am-polony marary
Redaction Midi Madagasikara 9 avril 2014
Maro ny mivarotra henan-tsokatra na voarara aza, tsy vitsy koa ny mpanjifa
Vokatry ny fihinanana Fano na soka-dranomasina izay voasokajy ho vokatra an-dranomasina misy poizina mahafaty noho ny fihinanany lomotra madinika tsy hita maso an-dranomasina, dia fianakaviana roa samihafa omaly maraina sy afak’omaly no marary mafy ao Toliara, ka ny iray amin’io ao amin’ny fokontany Mahavatse. Araka ny loharanom-baovao azo farany, dia misy amin’ireo marary no miady amin’ny fahafatesana amin’izao. Ny olana hita nandritra ny angom-baovao natao dia tsy sahy manatona mpitsabo na tobim-pahasalamana izay marary, fa manao dokotera tena. Efa mihombo ny aretina na misy maty vao taitra ny havany, ka mampanano sarotra ny fahafantarana ny tena isan’ireo marary.
Malemy ny tomponandraikitra. Ny tomponandraikitra sasany ihany koa toa mitazam-potsiny ka migalabona ireo mpivarotra, na dia hita izao aza fa voararan’ny lalàna ny fanjonoana, fivarotana ary fihinanana ny sokatra an-dranomasina, dia mbola betsaka no mivarotra izany ao Toliara, toy ny eo anoloan’ny biraon’ny zandary Mahavatse. Hatramin’ny mpitandro filaminana aza mihinana fano eo. Dia ho sanatria ve handrasana hisy faty olona mikararana indray vokatry ny fanapoizinana tambabe toy ny tamin’ny taona 2011 vao samy ho taitra ka handrasaina fanapahankevitra vonjy tavan’andro indray ?
Fano, Geba mahafaty. Nambaran’ny mpivarotra iray, efa am-polo taonany nanao ity asa ity, fa fano vavy iray isan’andro no vonoiny, raha tsy latsaky ny efatra izany teo aloha. Ratsy ny tsena amin’izao, hoy ny fanazavan’ity mpivarotra ity, ka roa hetsy sy telo alina ariary ny vidin’ny fano iray lehibe, raha 270 000 ariary izany teo aloha. Tetehina dia amidy 500 ariary amin’ny mpanjifa ny hena masaka izay tsy misarona, nefa Toliara toerana be rivotra sy lalitra ary mafana. Hatramin’ny trondro Geba misy poizina voarara anisan’ny namono olona maro ny taona 2011, dia mbola misy sahy mivarotra eny an-tsena sy entina mandehandeha. Rehefa mandalo ny tomponandraikitra manao fisavana dia afenin’ny mpivarotra ny entany. Ny fiovan’ny toe-tsain’ny tsirairay ihany no ahitam-bokatra hisorohana ny loza.
Rotary Club Antananarivo et Ivato : Une contribution à la lutte contre le COVID-19 remise à la CUA